चियाको आम्दानी १४७ % ले वृद्धि, अलैंचीमा भने सुधार आएन
असोज ३०, इलाम । प्रत्येक वर्ष निकासी खुम्चिरहने नेपाली चियाको निकासी यस आर्थिक वर्षमा उल्लेखीय सुधार आएको छ ।
गएको आर्थिक वर्ष २०७६/ ७७ को (साउन–भदौ) मा रू. ६४ करोड २३ लाख १ हजार बराबरको चिया निकासी भएकामा यस आव (साउन–भदौ) मा रू.१ अर्ब ५८ करोड ६६ लाख ५७ हजार मूल्य बराबरको चिया निकासी भएको व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रले बताएको छ ।
केन्द्रको तथ्यांकअनुसार गएको आव २०७६/ ७७ मा २३ लाख ५० हजार ७९० किलो चिया निकासी भएकामा यस आवमा बढेर ५३ लाख १७ हजार ५८२ किलो चिया निर्यात भएको छ । चियाको निकासी र आम्दानी ह्वात्तै बढ्नुका कारण भने भारतमा चिया उत्पादन कम हुनु भएको सरोकारवालाको भनाइ छ ।
व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको तथ्यांकअनुसार आव २०७४/ ७५ मा १ करोड ५६ लाख ८४ हजार ५४४ किलो चिया निर्यात भएकामा गत आव २०७५/ ७६ मा १ करोड ५० लाख ४३ हजार ७९६ किलो निर्यात भएको तथ्यांकले देखाउँछ । यसरी हेर्दा गत आवमा ६४ हजार ७४८ किलो चिया निकासी कम भएको देखिन्छ ।
आर्थिक वर्षको शुरुमा अलैंचीको निकासी गएको वर्षको तुलनामा घटेको छ भने अदुवाको तथ्यांक भने सामान्य बढेको छ । गत आव २०७६/ ७७ (साउन–भदौ) मा रू. ११ करोड ८३ लाख ५० हजार मूल्यको अदुवा निकासी भएकामा यस आव (साउन–भदौ) मा रू. १३ करोड ८४ लाख ७२ हजारको अदुवा निकासी भएको छ ।
यता अलैंचीको तथ्यांकमा भने सामान्य सुधार भए पनि गएको आवको तुलनामा घटेको देखिन्छ । गएको आव २०७६/ ७७ (साउन–भदौ) मा रू.१ अर्ब २ करोड ५९ लाख ८९ हजारको अलैंची निकासी भएको छ भने यस आव २०७७/ ७८ मा रू. ९६ करोड ७ लाख १६ हजार मूल्यको निकासी भएको देखिन्छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७६/ ७७ (साउन–भदौ) मा १२ लाख ७५ हजार २९४ किलो अलैंची नेपालमा निर्यात भएकामा यस आव २०७७/ ७८ (साउन–भदौ) मा १२ लाख ८४५ किलो अलैंची निर्यात भएको केन्द्रको तथ्यांकले देखाउँछ ।
यसरी अलैंचीको विक्री मूल्य घटेकाले पनि आम्दानी घटेको घिमिरेको भनाइ छ । यस आर्थिक वर्षमा कृषिजन्य पदार्थले कुल ३२ दशमलव छ प्रतिशत ओगटेको केन्द्रको तथ्यांकमा उल्लेख छ । रासस